China Manual High -precision Moisture Analyzer ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Jiahang Instruments
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Potentiometric Titrator > အစိုဓာတ်ထိန်းကိရိယာကိုခြေရာခံပါ > လက်စွဲ High-precision Moisture Analyzer
The JH-C5 လက်စွဲ High-precision Moisture Analyzer is an economical Coulometric Karl Fischer moisture analyzer launched by our company. The instrument uses the Karl Fischer principle to determine the moisture content of the sample by reacting the electrolytic reagent with the moisture in the sample.
1. လက်စွဲ High-precision Moisture Analyzer Introduction
လက်စွဲ High-precision Moisture Analyzer can quickly determine the properties of alcohols, oils, lipids, ethers, esters, acids, alkanes, benzenes, amines, organic solvents, pesticides, phenols, pharmaceutical raw materials, etc. The moisture content in different solids, liquids, and gases. It has the advantages of high measurement accuracy, fast speed, stable and reliable measurement data, applicable standards: GB/T1600; GB7600; B/T ကို 18619.1; GB/T ကို 11133; SH/T ကို 0246; SH/T 0255- နှင့်အခြားနည်းလမ်းစံများ။
2. လက်စွဲ High-precision Moisture Analyzer Parameter
ï¼ž99.7% (1000 ug သန့်စင်သောရေ)
reagent ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအရဂီယာ ၆ ချက်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုကိုရွေးချယ်ပါ
ကွဲပြားသောတွက်ချက်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဖော်မြူလာ ၆ မျိုး
၂၀ ~ ၈၀%
3. လက်စွဲ High-precision Moisture Analyzer Feature And Application
၁။ ထိတွေ့မှု၊ LED အရောင်အပြည့် LCD display၊ titration curve ၏အချိန်နှင့်တပြေးညီပြသခြင်း
2. အပြည့်အဝအလိုအလျောက်စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိ polarization ထောက်လှမ်းခြင်း၊ အဆုံးအချက်ကိုကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ရန်မလို၊ မြင့်မားသောထောက်လှမ်းမှုတိကျမှု၊
၄။ အစိုင်အခဲများ၊ အရည်များနှင့်ဓာတ်ငွေ့ကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားသော application များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်တွက်ချက်ဖော်မြူလာများပါ ၀ င်သည်။
၇။ အသိဥာဏ်ခြေရာခံခြင်းတန်ဖိုး၊ အလိုအလျောက်နောက်ခံဖြန့်နုတ်ခြင်း၊ နမူနာ၏စစ်မှန်သောအစိုဓာတ်ပါဝင်မှုကိုတိကျသောဆုံးဖြတ်ခြင်း၊
8. အထူးနမူနာထောက်လှမ်းမှုအတွက်သင့်တော်သော End-point delay function၊
၉။ အခွင့်အာဏာစီမံခန့်ခွဲမှု၊ စာရင်းစစ်လမ်းကြောင်း၊ GLP/GMP စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီလိုက်နာပါ။
10. အကွိမျမြားစှာဒေတာ interfaces (RS-2232C, USB, WEB interface)
4. Fields of use လက်စွဲ High-precision Moisture Analyzer
လက်စွဲ High-precision Moisture Analyzer isageneral-purpose laboratory equipment and is widely used. It can be used in food, drug inspection, disease control, commodity inspection, water treatment, petroleum, chemical, marine, electric power, environmental protection, new energy, teaching, scientific research, etc. Related areas.
Jiahangလက်စွဲ High-precision Moisture Analyzer has obtained CE certification, TART certification, ISO quality management system certification, more than 10 software copyrights and multiple patents to ensure that each instrument has stable performance and excellent quality.
မေး။ ။How many years have your company made လက်စွဲ High-precision Moisture Analyzer?
hot Tags:: Manual High-precision Moisture Analyzer၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ၊ စျေးပေါ၊ အဆင့်မြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စျေး၊ CE